डार्टले लियो जंगली हात्तीको ज्यान – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
डार्टले लियो जंगली हात्तीको ज्यान
२०७० फाल्गुन ४, आईतवार ०४:१३ गते
कसरा । चारजना मान्छेको ज्यान लिएको ध्रुवे नामको जंगली हात्तीलाई मार्ने निर्णय हुँदासमेत गत वर्ष निकुञ्जले त्यसलाई मार्न सकेन, तर अर्को जंगली हात्तीको आक्रमणबाट एक स्थानीयको ज्यान गएपछि त्यस हात्तीलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि डार्ट गर्दा नै हात्ती मरेको छ ।
लठ्ठ (डार्ट) बनाउने औषधि प्रयोग गरी रेडियोकलर जडान गर्न खोज्दा ४० वर्षको भाले हात्तीको ज्यान गएको छ । बेहोस् भएर ओरालोमा लडेको हात्तीको फोक्सोमा चाप परेका कारण श्वासप्रश्वास रोकिएर ज्यान गएको चितवन निकुञ्जले जानकारी गराएको छ ।
चितवन माडी क्षेत्रको गर्दी गाविस वडा नं. १ अमेलिया गाउँका शेरबहादुर परियारको माघ २२ गते राति हात्तीले आक्रमण गर्दा ज्यान गएको थियो । सोही हात्तीले गर्दी र बघौडाका आधा दर्जन घरहरुमा क्षतिसमेत पु¥याएपछि निकुञ्जले हात्तीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास सुरू गरेको थियो । शुक्रबार मध्येरातमा डार्ट गरिएको सो हात्ती त्यसपछि होस्मा आउन सकेन ।
सुरक्षा टोलीले शुक्रबार मध्यरातमा हात्तीलाई लठ्याउने औषधि जाइलोजिन दिएको थियो । सो औषधिले लठ्ठिएको हात्तीलाई बेहोस् बनाएर रेडियो कलर राख्न ‘एम ९९’ नामक औषधि दिइएको चितवन निकुञ्जले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रेडियो कलर जडान गरेर हात्तीको नियमित अनुगमन गर्ने निकुञ्जको योजना थियो ।
रेडियो कलर जडान गरेपछि हात्तीलाई होस्मा ल्याउन ‘जाइलोजिन’ र ‘एम ९९’ को एण्टिडोज दिइएको थियो । एण्टिडोज दिएको पाँच मिनेटपछि नै हात्तीको ज्यान गएको छ । ‘साढे सातबजे होस्मा आउने औषधि दिइएको थियो । त्यो बेलासम्म हात्तीले सास फेरेको थियो । त्यसको पाँच मिनेटपछि श्वासप्रश्वास बन्द भयो’ चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरले भने ।
हात्ती बेहोस् हुँदा ओरालोमा परेको कुँवरले जानकारी दिए । ‘ओरालो र अफ्ठ्यारो ठाउँमा प¥यो । समथर ठाउँमा सार्न सकिएन । ठूलो जनावरको पेटले फोक्सोलाई च्याप्यो । श्वासप्रश्वासमा समस्या आएर हात्तीको ज्यान गएको हो’ प्रमुख संरक्षण अधिकृत कुँवरले जानकारी गराए । पशु चिकित्सकको टोलीले घटनास्थलमै हात्तीको पोष्टमार्टम गरेको थियो ।
पोष्टमार्टमपछि घटनास्थलमै हात्तीलाई गाडिएको हो । हात्तीलाई माघ २९ गते साँझ पनि ‘जाइलोजिन’ हानिएको निकुञ्जको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘जाइलोजिन’ हान्नासाथ हात्ती जंगल पसेकाले त्यस दिन थप बेहोस् बनाउने औषधि दिन सकिएको थिएन । शुक्रबार मध्येरातमा ‘जाइलोजिन’ हानिएपछि हात्ती गाउँनजिक नै बसेको थियो ।
गत वर्ष माडीमा ध्रुवे नाम गरेको जंगली हात्तीले चारजनालाई मारेको थियो । त्यसपछि सो हात्तीलाई नियन्त्रणमा लिन पटक–पटक डार्ट गरेर रेडियो कलर राखिएको थियो । ध्रुवेलाई मार्न गोलीसमेत हानिएको थियो, तर ध्रुवे मरे बाँचेको पत्ता लागेको छैन । रेडियो कलर राख्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले नै अनुमति दिएको निकुञ्जले जनाएको छ ।
निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी टीकाराम पौडेलका अनुसार बढीमा पाँचवटा जंगली हात्तीमा रेडियो कलर जडान गर्न विसं. २०६८ साल पुस १४ मा सरकारले निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, गएको भदौमा पनि निकुञ्ज क्षेत्रमा एक्लै हिँड्ने भालेहरुको अनुगमन गर्न विभागसँग निकुञ्जले अनुमति मागेको थियो ।